skip navigations | Japanese (日本語)|English About Us
သက်ဆိုင်ရာ Website များ
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 သတင်းစဉ်
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်သံရုံး၏ သမိုင်းကြောင်း
ကာလကတ္တားအခြေစိုက် ဂျပန်ကောင်စစ်ဝန်ရုံး မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်ကောင်စစ်ဝန်ရုံး (၁၉၂၀- ၁၉၅၁)
၁၉၁၀ခုနှစ် နှောင်းပိုင်းမှစ၍ မြန်မာနိုင်ငံသို. ဂျပန် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် ကုန်သည်များသည် ကုန်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းများနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ ဆက်ဆံမှုများ ပြုလုပ်လာကြပြီး ဂျပန် လူမျိုးများလည်း မြန်မာနိုင်ငံသို. တဖြည်းဖြည်း လာရောက် လည်ပတ်လာကြပါသည်။ ၁၉၂၀ခုနှစ်တွင် ကာလကတ္တားအခြေစိုက် ဂျပန် ကောင်စစ်ဝန်ရုံးဌာနခွဲ တစ်ခုအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ဂျပန် လူမျိုးများ မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက် လည်ပတ်ခြင်းအတွက် အဆင်ပြေချောမွေ့အောင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ထိုခေတ်ထိုအခါက ဂျပန်လူမျိုးပိုင် ကုန်စုံဆိုင် (ကုန်တိုက်)၊ တည်းခိုရိပ်သာ၊ ဟင်းဆိုင်၊ သွားဘက်ဆိုင်ရာဆေးကုခန်း၊ ဓါတ်ပုံတိုက်များက နေရာဒေသ အသီးသီးတွင် ဖွင့်လှစ် ဆောင်ရွက်လာခဲ့ပါသည်။ ထိုအချိန်က အကြောင်းအရာများကို မှတ်တမ်းတင်နိုင်ရန် စာရွက်စာတမ်း အထောက်အထားများလည်း ရှားပါးခဲ့သော်လည်း ၁၉၅၁ခုနှစ်တွင် ကောင်စစ်ဝန်ရုံးခန်း ပြောင်းရွှေ့ဖွင့်လှစ်ပြီးနောက်တွင် ထိုအဆောက်အအုံအား ပုဂ္ဂလိကပိုင် တည်းခိုရိပ်သာ တစ်ခု အဖြင့်အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ များမကြာမီ ၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင် ထိုအဆောက်အအုံအား ဖြိုဖျက်၍ ထိုနေရာ၌ ပုဂ္ဂလိကပိုင် ဟိုတယ် တစ်ခုအဖြစ် ယခုအချိန်တွင် ဖွင့်လှစ် ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။ ဂျပန်နိုင်ငံခြားရေးအေဂျင်စီ (၁၉၅၁ - ၁၉၅၃)
ဤအဆောက်အအုံသည် ၅ ထပ်အဆောက်အဦးဖြစ်ပြီး ၄ ထပ်တွင် ရုံးခန်းဖွင့်လှစ်၍ ၁၉၅၂ ခုနှစ် သြဂုတ်လတွင် ကောင်စစ် ၀န်ရုံးအဖြစ် စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ထိုအချိန်က ပထမထပ်တွင် ကုန်တိုက် (ကုန်စုံဆိုင်)၊ ဒုတိယထပ်တွင် ရှေ့နေရုံးခန်းများ၊ အသီးသီးဖွင့်လှစ်ကြပါသည်။ ရုံးတာဝန်ခံအပါအ၀င် စုစုပေါင်းဝန်ထမ်း ၄-၅ ဦးသာ ထားရှိသောစံနစ်ဖြင့် ရုံးလုပ်ငန်းများကို စီမံဆောင်ရွက်ခဲ့ပါ သည်။ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဂျပန်သံရုံး (၁၉၅၃ - ၁၉၅၆) ၁၉၅၄ ခုနှစ်တွင် ဂျပန်မြန်မာသံတမန်ချစ်ကြည်ရေး စတင်ဆောင်ရွက်၍ နှစ်နိုင်ငံ အသီးသီး သံရုံးများ ဖွင့်လှစ် ဆောင်ရွက်လာခဲ့ကြပါသည်။ ထိုအချိန်က ဤအဆောက်အအုံသို့ ကောင်စစ်ဝန်ရုံးခန်းအား ပြောင်းရွှေ့ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ မြန်မာနိုငံဆိုင်ရာဂျပန်သံရုံး (၁၉၅၆ - ၁၉၇၇) ထိုအချိန်ကရွှေတောင်ကြားဆိပ်ငြိမ်ရပ်ကွက်၏ သစ်ရိပ်ဝါးရိပ်ကောင်းပြီး၊ ယဉ်သွားယဉ်လာနည်းပါး၍ အေးချမ်း တိတ်ဆိတ်သောနေရာတွင် တည်ရှိခဲ့ပါသည်။ ဤနေရာတွင် ကောင်စစ်ဝန်ရုံးခန်း စတင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သော အချိန်ကာလ ၁၉၆၂ခုနှစ်၊ မတ်လတွင် စစ်သေနာပတိချုပ် ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်း ခေါင်းဆောင်သော တော်လှန်ရေး ကောင်စီအစိုးရမှ တိုင်းပြည် အုပ်ချုပ်နေချိန်ဖြစ်ပါသည်။ သံရုံးဖွင့်ချိန်
တနင်္လာနေ့ မှ သောကြာနေ့အထိ (ရုံးပိတ်ရက်များမပါ) - နံနက် ၈ နာရီ ၃၀ မိနစ် မှ - နေ့လည် ၁၂ နာရီ ၃၀ မိနစ် - နေ့လည် ၁ နာရီ ၃၀ မိနစ် မှ - ညနေ ၅ နာရီ ၁၅ မိနစ် (24 hours in case of emergency)
၀၉:၀၀ - ၁၁:၃၀
၁၃:၃၀ - ၁၇:၀၀
ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက် ( အင်္ဂါနေ့ )	-
ဇန်နဝါရီလ ၂ ရက် ( ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ) -
ဇန်နဝါရီလ ၃ ရက် ( ကြာသပတေးနေ့ ) -
ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက် ( သောကြာနေ့ )
လွတ်လပ်ရေးနေ့ မတ်လ ၂၆ ရက် (အင်္ဂါနေ့ )	-
တပေါင်းလပြည့်နေ့ ဧပြီလ ၁၂ ရက် ( သောကြာနေ့ ) -
မြန်မာနှစ်သစ်ကူးရုံးပိတ်ရက် ဧပြီလ ၁၅ ရက် ( တနင်္လာနေ့ ) -
မဟာသင်္ကြန်အကြတ်နေ့ ဧပြီလ ၁၆ ရက် ( အင်္ဂါနေ့ )
ဧပြီလ ၁၇ ရက် (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ )
ဧပြီလ ၁၈ ရက် ( ကြာသပတေးနေ့ ) -
ဧပြီလ ၁၉ ရက် ( သောကြာနေ့ ) -
မြန်မာနှစ်သစ်ကူးရုံးပိတ်ရက် မေလ ၂၄ ရက် ( သောကြာနေ့ ) -
ကဆုန်လပြည့်နေ့ ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက် ( သောကြာနေ့ ) -
ဇူလိုင်လ ၂၂ ရက် ( တနင်္လာနေ့) -
နိုဝင်ဘာလ ၂၇ ရက် (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ) -
ဒီဇင်ဘာလ ၃၀ ရက် (တနင်္လာနေ့ ) -
ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက် (အင်္ဂါနေ့ )	-
အမှတ် ၁၀၀၊ နတ်မောက်လမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
၀၁ - ၅၄၉၆၄၄ ～၈ FAX
၀၁ - ၅၄၉၆၄၃
Economic Section information and Culture Section
Consular Section You may send your opinion and comment to the Embassy of Japan in Myanmar. We appreciate your opinion and comments in order to improve our future Embassy activities. Guide Map to the Embassy
Top Copyright © 2011 - The Embassy of Japan in Myanmar